NYI LYNN SECK 18+ DEN: February 2008
မနဿတလေး မှာ လောင်တဲ့မီး
ဦးကျားကြီးအပြီး ဒှေါတရုတ်မကြီး မနဿတလေးမှာလောင်တဲ့မီး
မှတ်မှတ်ရရ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးပတ်လောက်က မနဿတလေးကိုရောက်တော့ ကျွန်တှော့လက်ထဲမှာ မနဿတလေးအကြောင်း စာအုပ်တွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့။ ကျွန်တှောဟာ ရဂလမ်း တစ်လျောက် ကားမောင်းရင်း မနဿတလေးမှာ လောင်ခဲ့တဲ့ မီးတွေအကြောင်း စဉ်းစားနေခဲ့မိတယ်။ ၁၉၈၄ခုနှစ်မှာ မနဿတလေး မြို့လယ် တစ်ခုလုံး ပြာပုံဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ဦးကျားကြီးမီးအကြောင်း ပြောရင်း ဒီ ရတနာပုံဈေး နေရာလေးကတော့ အဲဒီတုန်းက မီးဘေး မခံလိုက်ရဘဲ ကွက်ကျန်ခဲ့တဲ့ နေရာလေးဆိုပြီး အသိမိတ်ဆွေတွေကို မှတ်မှတ်ရရကို ပြောပြဖြစ်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒုတိယ ကမဿဘာစစ်ကတည်းက မီးလောင်ဗုံး ဒဏ်တွေကြောင့် မီးဟုန်းဟုန်း တောက်ခဲ့ရတဲ့ မြို့ကြီး၊ ၁၉၇၉၊ ၈၁ နဲ့ ၈၄ မှာ မီးကြီးသုံးကြိမ် ထပ်နှိပ်စက်လိုက်တာ မြို့တစ်ခုလုံးနီးပါး ပြာပုံကို ဖြစ်သွားခဲ့ရတာ။ မီးလောင်ပြင်ထဲကနေ ပြန်နိုးထလာတဲ့ ဖီးနစ်ငှက်ဆိုပြီး စာရေးဆရာတွေ အမြဲပြောနေခဲ့ရတာ။ အခုတော့ အဲဒီမီးဘေးကြီးတွေကနေ ကွက်ကျန်နေခဲ့တဲ့ မြို့ရဲ့ အစည်ကားဆုံး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အများဆုံး နေရာလေးကိုမှ ရက်ရက်စက်စက် မီးက နှိပ်စက်လိုက်တာ ကျွန်တှော့ဖြင့် ရင်နာလို့ မဆုံးနိုင်တော့ပါဘူး။
ကျွန်တှောရုံးရောက်တော့ နံနက် ကိုးနာရီ။ အီးမေးလ်ထဲကို ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွ မနဿတလေး ရတနာပုံဈေးမှာ မီးလောင်နေပြီဆိုတဲ့သတင်း ချက်ခြင်း ရောက်လာတယ်။ ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီကို ဖုန်းဆက်တော့ ဖုန်းလိုင်းတွေအားလုံး ပြတ်နေတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ အင်တာနက်လိုင်းတွေ ပြတ်မသွားတာကြောင့် အင်တာနက်ကတဆင့် သတင်းတွေ အဆက်မပြတ် ရောက်လို့လာခဲ့တယ်။ အချိန်တွေ ကြာကြာလာတာနဲ့အမျှ မီးညွန့်ကျိုးသွားတယ် ဆိုတာ မကြားရဘဲ အရှေ့ဘက်ကနေ အနောက်ဘက်ကို ကူးလာပြီ၊ စကိုင်းဝေါ့ခ် ရှော့ပင်းမော ကုန်သွားပြီ၊ မနဿတလေး အမ်အိုင်စီတီ ကုန်သွားပြီ၊ အပှေါထပ်တွေ လောင်နေပြီ စတဲ့ သတင်းတွေသာ ရင်နာနာနဲ့ ကြားနေရပါတယ်။ ၂နာရီ ထိုးမှာတော့ တတိယထပ်မှာရှိတဲ့ Relax ဆိုင်ကနေ ဂက်(စ်)အိုးတွေ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲသံတွေ ထွက်လာပါတယ်တဲ့။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဆိုင်တွေ ရှိတာမို့ စုံစမ်း မေးမြန်းတော့လည်း ဖုန်းက လုံးဝကို ဆက်လို့ မရတော့ပါဘူး။ မရှေးမနှောင်းဘဲ အင်တာနက် ဘလော့ဂ်တွေမှာ စာတွေရေး ပုံတွေတင်မှာစိုးလို့ ဘလော့ဂ်တွေကို ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်း ကျွန်တှော့ဆီကို ရောက်လို့လာတယ်။ ဒါနဲ့ မေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါ ဟုတ်နေတာကို တွေ့ရပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘလော့ဂ်တစ်ခုတည်းကိုသာ လူပြောများလို့ သိတဲ့ သူတွေဟာ တခြားဟာတွေကိုတော့ မသိခဲ့ကြဘူး။ ကောင်းလေစွ၊ ကောင်းလေစွ။ မနဿတလေး မီးလောင်တာကို ဂြိုလ်တုကနေတောင် ပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလိုနည်းပညာခေတ်မှာ မီဒီယာကို အတင်းကာရောတွေ လိုက်ပိတ်တာကို ကျွန်တှောဖြင့် အံ့ဩလို့ မဆုံးဘူး။ ကျွန်တှောတို့ဟာ ဒီလို မီဒီယာတွေကြောင့် မိုင်ပေါင်း ၅ဝဝလောက်က အဖြစ်အပျက်တွေကို ကိုယ်တိုင် မကြုံရပေမယ့် ကိုယ်တိုင် ကြုံရသလို ခံစားလို့ရတယ်။ ဒါဟာ အကျိုးအမြတ်ပါ။ ဒါတွေကို ဘာကြောင့် ပိတ်ချင်တာလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားလို့ကို မရပါဘူး။ (စဉ်းစားမရဘူးလို့ပဲ ထားလိုက်ပါလေ)
ဒီမီးဟာ ဆုံးရှုံးမှုအင်အား အတှောကြီးကို များပြားပါတယ်။ အောက်ထပ်ပတ်လည်က ဆိုင်ခန်း တစ်ခန်းကို သိန်း ၃၀၀ ရှိတယ်။ အပှေါထပ်က ဆိုင်ခန်း တစ်ခန်းကို အနည်းဆုံး သိန်း ၅၀၀ ရှိတယ်။ ဆိုင်ခန်းက တစ်ထောင့်ငါးရာကျှော ရှိတယ်ဆိုတော့ ပစဿစည်းမပါ ဆိုင်ခန်း တန်ဖိုးချည်းပဲ ၆၀၀,၀၀၀,၀၀၀၀၀ (ကုဋေခြောက်ထောင်ကျှော) ရှိနိုင်ပါတယ်။ ပစဿစည်းပါ ထည့်တွက်ရင် ကုဋေတစ်သောင်းနှစ်ထောင်ကျှောဖိုး (အမေရိကန်ဒှေါလာ သန်း၁ဝဝကျှောဖိုး) လောက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ ကျွန်တှော တွက်ဆပါတယ်။ ဒီပမာဏဟာ အစကတည်းကမှ စီးပွားရေး ကျပ်တည်းနေကြတဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ အရှိုက်ကို လက်သီးနဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်း ထိုးလိုက်သလိုပါပဲ။ (Updated 26 feb)
ပထမဆုံး စမီးလောင်တာ ခုနစ်နာရီခွဲလောက်ပဲ ရှိဦးမယ်။ အရှေ့ဘက်တန်း အောက်ထပ်က ကစတာ။ ဒှေါတရုတ်မရဲ့ ပန်းကန်ဆိုင်ကနေ မီးစက်နှိုးရင်း ဝါယာရှော့ ဖြစ်တာကနေ စလောင်တာလို့ ပြောတယ်။ စစချင်းက နဲနဲလေးပဲ ရှိသေးတယ်။ အဲဒါကို ကျိတ်ပြီး သတ်နေကြတယ်။ မနိုင်တော့မှ မီးသတ်ကားတွေ လာတယ်။ လောင်တဲ့နေရာကို သေချာ မပက်ဘဲ မီးမလောင်သေးတဲ့ လမ်းတစ်ဖက်က သူဌေးတိုက်တွေကို ပက်နေတယ်။ နောက်တော့ ရေစုပ်စက်ငှားတယ်။ ခဏပဲမီးသတ်ပြီး ရေစုပ်စက်ကို ရပ်ထားတယ်။ ဒီအတိုင်း ကြည့်နေကြတယ်။ အဲဒီမှာ မီးက တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာလိုက်တာ နောက်ဆုံး မနိုင်တော့ဘူး။ ဈေးပတ်ပတ်လည်ကို ကားတွေ ဝင်လို့မရတော့ ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ အမ်အိုင်စီတီအထပ်က ကွန်ပျူတာတွေကိုတော့ သယ်ခွင့်ပေးတာ တွေ့တယ်။ အောက်ထပ်က ဆိုင်တွေကိုတော့ ဆိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် သော့နဲ့လာတာတောင် ယူခွင့် မပြုဘူး။ အထပ်အမြင့်ကြီးကို ပက်နိုင်တဲ့ မီးသတ်ကားက နှစ်စီးပဲ လာတာ တွေ့ရတယ်။ ဆိုင်ခန်းတွေကလည်း ကိုယ်ပိုင် မီးသတ်ဘူးတွေဘာတွေ မထားကြဘူး။ အဆောက်အဦမှာကလည်း မီးလောင် အချက်ပေးစနစ်တို့ အလိုအလျောက် ရေဖြန်းစနစ် (water sprinklers) တွေ မရှိတော့ ဒီမီးလောင်နေတာကို ရပ်ကြည့်နေရုံပဲ တတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ တချို့ကလည်း ပစဿစည်းတွေကို ဝင်ယူကြတယ်။ ဘယ်သူတွေမှန်းလဲ မသိဘူး။ မီးသတ်ကို ဘယ်သူမှ မကျေနပ်ကြဘူး။ သူတို့ ဘာမှမလုပ်လို့ အားလုံးပြာကျကုန်ရတာ။ ကိုယ့်ဆိုင်ခန်း မီးလောင်နေတာကို ဒီအတိုင်း ရပ်ကြည့်နေရတာလောက် ရင်နာတာ မရှိဘူးဗျာ
ဒါတွေကတော့ ဒီနေ့ညနေပိုင်း သိခဲ့ရတဲ့၊ ကြားခဲ့ရတဲ့ သတင်းစကားတွေပါ။ မှားတာတွေလည်းပါမယ် မှန်တာတွေလည်း ပါမယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ပိုင် စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဗျာ။ မနဿတလေးဆိုတာ ပထမဆုံး ကျွန်တှော ပြောခဲ့သလို မီးနဲ့ ပတ်သတ်ရင် ရာဇဝင် ရှိတဲ့မြို့။ မီးလောင်လို့ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပေါင်းလည်း များလှပြီ။ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အချက်အခြာ စီးပွားရေး မြို့တှောတစ်ခု။ ဒီလို မြို့မှာ အဆင့်မီ၊ အဆင့်မြင့် မီးသတ်ကားတွေ လုံလုံလောက်လောက် မရှိတာ တှောတှော့ကို ဆိုးရွား ရက်စက်ပါတယ်။ မီးကိုသာ အချိန်မီ ငြှိမ်းသတ်နိုင်ရင် အခုလို ဆုံးရှုံးမှု ကြီးမားမှာ မဟုတ်ဘူး။ မီးကာကွယ်ရေး စနစ်တွေ၊ ကိရိယာတွေဆိုတာ အကျိုးအမြတ် ပြန်ရဖို့ထက် အကုန်အကျခံပြီး ပြည်သူအတွက် ပေးရတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမျိုးပါ။ အဲဒီအတွက် သန်းတစ်ရာ ကုန်ကုန်၊ သန်းတစ်ထောင် ကုန်ကုန် အကုန်အကျ ခံသင့်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ လူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။ နောက်တစ်ခုက ဒီလောက် ကြီးမားတဲ့ စီးပွားရေး အဆောက်အဦးကြီးမှာ မီးကာကွယ်ရေး မီးငြိမ်းသတ်ရေး စနစ်တွေ တပ်ဆင် မထားတာပါပဲ။ တကယ်ဆို နိုင်ငံတကာမှာ ဒီလိုစနစ်ဟာ အဆောက်အဦတိုင်း လိုလိုမှာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တှောတို့ ဆီမှာ မရှိခဲ့ဘူး။ အခုတော့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်က စတဲ့မီးဟာ လူများစွာကို ဆုံးရှုံးမှု အများကြီး ပေးခဲ့ပြီ။ ကျွန်တှောတို့ဟာ ကိုယ့်ကို ကိုက်စားမယ့် ကျားရှေ့မှာ ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘဲ လည်စင်းနေရုံသက်သက်သာ တတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
နောက်တစ်ခါ ကျွန်တှော မနဿတလေး ရောက်တဲ့အခါ မီးလောင်ပြင်ထဲက ရတနာပုံဈေးကြီးကို တွေ့ရတော့မယ်။ မနဿတလေးရဲ့ မျက်နှာတည့်တည့်မှာ ကန့်လန့်ဖြတ်နေတဲ့ မီးလောင်ရာကြီးကို တွေ့ရတော့မယ်။ ကျွန်တှော အမြဲသွားနေကြ အမ်အိုင်စီတီပါခ်ကြီးလည်း တိတ်ဆိတ်နေတော့မယ်။ အရင်က ပျားပန်းခတ် စက်ဘီးတွေ ရပ်နားရာ နေရာမှာ မီးသွေးခဲ အစအနတွေကိုပဲ တွေ့ရတော့မယ်။ ကျွန်တှောတန်ဖိုးထားတဲ့ မနဿတလေးက အရာတွေ တှောတှောများများလည်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ များလှပြီ။ ကျွန်တှောတို့ဟာ တကယ်လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ တကယ်လိုအပ်တဲ့ အရာတွေကို အကျိုးရှိစွာ လုပ်နေတာ၊ အများအကျိုးကို ရှေးရှုပြီး လုပ်နေတာ ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ တှောတှောလေး စဉ်းစားဖို့ ကောင်းနေပါပြီ။ မီးလောင်ပြင်ထဲက ရတနာပုံဈေးကြီး အမြန်ဆုံး ပြန်ထနိုင်ပါစေ။ ကျွန်တှောချစ်တဲ့ ဖီးနစ်ငှက်လေး အရင်ကထက် ပိုမိုနုပျို ရှင်သန် ထမြောက်နိုင်ပါစေလို့ပဲ ကျွန်တှော ဆုတောင်းနေခဲ့မိတော့တယ်။
မန်းမှ မီးသတင်း နောက်ဆက်တွဲများ ၂၆ရက် ဖေဖှောဝါရီ
ရတနာပုံဈေး မီးမသေဘဲ ပြန်ထလောင်။ မနေ့က မလောင်ဘဲ ကျန်ရစ်သော အမ်စီစီ ယနေ့မှ လောင်သွား
ဒီမှာအမြတ်ထွက်သွားတဲ့ ဝိသမလောဘသားက ဈေးချိုဆောက်တဲ့လူ () မီးလောင်တာနဲ့ အရင်က သိန်း၃၀၀ ၅ရစ်ခွဲ သွင်းတာတောင် မကုန်တဲ့ ဆိုင်တွေ ၃ဝဝလက်ငင်း ဝယ်တာတောင် ၁၁နာရီကျှောတော့ မရောင်းတော့ဘဲ ဂဝဝထိ တက်အှောတယ်။ သူများ ဒုကဿခရောက်တော့ ပွပြီဆိုပြီးလုပ်လို့ဈေးကို သူမီးရှို့တာ ထင်တယ်လို့တောင် နောက်နေကြတယ်။ မီးတောင် မငြိမ်းသေးဘူး လုပ်နေလိုက်ကြတာဗျာ။
မီးသတ်တာဗျာ လူတွေ၊ မီးသတ်တွေ၊ ဘုန်းကြီးတွေ တွေ့ရပေမယ့် () တစ်ယောက်တောင် မတွေ့ရဘူး။
Ko Zin Min Swe's Multiply
Posted by NLS at 2/26/2008 10:08:00 AM No comments:
Labels: Diary, Essay, Mandalay, Thought
512 Memroy for Sale
ကျွန်တှော့ လပ်တော့ ကွန်ပျူတာမှာ သုံးနေတဲ့ 512 မန်မိုရီ နှစ်ချောင်း ရောင်းချင်တယ်။ နှစ်ချောင်းစလုံးကို သူခိုးဈေး ငါးသောင်းနဲ့ ရောင်းပါမယ်။ Kingston အမျိုးအစားက တစ်ချောင်း၊ Samsung အမျိုးအစားက တစ်ချောင်းပါ။ Samsung အမျိုးအစားက သက်တမ်း ရလလောက် ရှိပါတယ်။ Kingston ကတော့ ၃လလောက်ပဲ ရှိပါမယ်။ DDR2 667(333MHz) ဖြစ်ပါတယ်။ As soon as possible!!!! အရင်ဆုံးလာတဲ့သူ အရင်ဆုံး ရမှာပဲနှော့။ :)
Posted by NLS at 2/21/2008 09:59:00 PM No comments:
Labels: Advertising, Auction, Computer
ဒါလေးကတော့ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာများ၊ IRC မြန်မာများ အထူးနှစ်ခြိုက် သဘောကျကြတဲ့ Burglish ဆိုတဲ့ စနစ်လေးပါ။ ဟိုးအရင် ဇှောဂျီမပှေါခင်၊ ဘရောက်ဇာတွေကလည်း UTF 8 ကိုမပံ့ပိုးချိန်က ကျွန်တှောတို့ဟာ အင်တာနက်ချတ်ရွန်းတွေပှေါမှာ Burglish ကို သုံးခဲ့ရတယ်။ ဘားဂလစ်ရ်ှဆိုတာ မြန်မာအသံထွက်ကို အဂဿငလိပ်လို တိုက်ရိုက်ရေးတာပေါ့။ ဥပမာ သတိရတယ် ဆိုရင် Tha di ya tel အဲဒီလို ရေးကြရတယ်။ နောက်ပိုင်း ဇှောဂျီပှေါလာလို့ တှောတှောများများ အဆင်ပြေသွားပေမယ့် မြန်မာလက်ကွက် မရိုက်တတ်သူတွေ ကျန်နေတုန်းပါပဲ။ မာခ့်တို့ ဒီဟာလေးကို လုပ်နေတာ တှောတှောကြာပါပြီ။ ကျွန်တှောကိုယ်တိုင်က ဘားဂလစ်ရ်ှကို မကြိုက်ပေမယ့် ဒီစနစ်လေးနဲ့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ကိုင်သွားတဲ့ ပုံစံလေးတွေကို သဘောကျ နှစ်သက် လေးစားမိပါတယ်။ ပထမဆုံး သူတို့ ဒါလေးကို စမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ ယူဇာတွေနဲ့ Participate လုပ်ပါတယ်။ ယူဇာတွေကို စမ်းသပ်သုံးစွဲခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီလို စမ်းသပ်နေချိန်မှာ ယူဇာတွေ ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ စာလုံးတွေကို သူတို့ သိမ်းထားပြီး အသံတစ်မျိုးအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ စာလုံးတွေ အားလုံးကို စီစဉ်ပေးထားတာပါပဲ။ နောက်ဆုံး သူတို့ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဟာတွေအားလုံးကို Google Code အနေနဲ့ စနစ်တကျ တင်ထားပြီး အားလုံး ယူသုံးနိုင်အောင် အခမဲ့ ဖြန့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တှောတို့ရဲ့ နည်းပညာ တှောလှန်ရေး ကာလမှာ ထင်ရှားတဲ့ ရလဒ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာလေးမှာ ကျွန်တှောတို့ဟာ အဂဿငလိပ်အသံ တစ်ခုစီအတွက် တိကျတဲ့ ဖိုနက်တစ် မပါတဲ့ စာလုံးစနစ် တစ်မျိုးကိုသာ စနစ်တကျ သတ်မှတ်နိုင်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် အလွန်ကောင်းတဲ့ စနစ်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - ခကို Kha၊ ခါကို Khar၊ ခါးကို Kharr၊ ခါ့ကို Khaa စသည်ဖြင့်ပေါ့။ အားလုံးက စနစ်တခု စတင်ချိန်မှာ ဖင်ပိတ်ပြီး ငြင်းမနေဘဲ လိုက်လျောညီထွေစွာ လက်ခံကျင့်သုံးပြီး ဒီစနစ်ကို ကူညီ အကောင်အထည် ဖှောပေးဖို့ ဆိုတာကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ချားလ်ဒါဝင် ပြောခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်း ရှိတယ်။ အခုအချိန်အထိ ရှိနေတဲ့ သတဿတဝါတွေဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ခံနိုင်ရည် ရှိလို့တင် မကဘဲ သဘာဝနဲ့ လိုက်လျောညီထွေစွာ ပြောင်းလဲ နေထိုင်တတ်ခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်ပါသတဲ့။
Google Code : http://code.google.com/p/burglish
Discussing Area: www.mmgeeks.org
Posted by NLS at 2/21/2008 09:05:00 PM No comments:
Labels: Language, Myanmar
Zawgyi Text Editor
သင့်မှာ လက်တစ်ဖက် မရှိဘူး ဆိုကြပါစို့။ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာစာ မရိုက်တတ်ဘူး ဆိုကြပါစို့။ အလွယ်တကူနဲ့ မြန်မာစာ ရိုက်နိုင်တဲ့ Onscreen Text Editor လက်ကွက်လေးကို Saturn God ကဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ ဇှောဂျီဖောင့်နဲ့ ဖြစ်ပါမယ်။ ဒါလေးဟာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ထင်ရပေမယ့် အထက်ကလို အခြေအနေတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ အလွန်ပဲ အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by NLS at 2/21/2008 08:29:00 PM No comments:
Labels: Tools, Zawgyi
Poppa Myanmar Online Encyclopedia
မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို နောင်လာမယ့် နှစ်အနည်းငယ် အတွင်းမှာ အားလုံးရဲ့ လက်ထဲကို ဖြန့်ချ ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ထွက်ရှိပြီးခဲ့သမျှ အဘိဓာန်တွေအပြင် ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေစုဆောင်း ပြုစုခဲ့ရတဲ့ အချက်အလက်တွေလည်း အများကြီး ပါဝင်ပါမယ်။ အဓိကကတော့ တကွဲတပြားစီ ဖြစ်နေတဲ့ အဘိဓာန်တွေကို စုစည်းပြီး ကွန်ပျူတာ စနစ်နဲ့ ဒေတာဘဏ်တိုက် ပြုလုပ်တာပါပဲ။ ပညာရှင်တွေ သုတေသန သမားတွေ၊ မြန်မာစာ မြန်မာမှုကို လေ့လာလိုက်စားသူတွေ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုနိုင်ရုံနဲ့တင် အချက်အလက်တွေကို တစ်နေရာထဲကနေ ရှာဖွေနိုင်အောင် ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါပဲ။
ဒီစွယ်စုံကျမ်းဟာ အထက်က အဘိဓာန်ကို အခြေခံထားသလို အဘိဓာန်မှာ မပါဝင်တဲ့ အခြားသော အကြောင်းအရာများကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ စာအုပ်တွေရဲ့ စာညွှန်းအကျဉ်း Abstract တွေပါသလို၊ သမိုင်းမှာ မထင်ရှားပေမယ့် အထောက်အထား ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ လူပုဂဿဂိုလ်တွေရဲ့ အကြောင်းအရာတွေလည်း ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာပြည်နဲ့ စပ်ဆက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ပုဂဿဂိုလ်တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အဓိကကတော့ အခြေခံ အချက်အလက်တွေကို စုစည်းပေးထားတာပါပဲ။ ဒီလို စုစည်းရာမှာလည်း သာမန်သူတွေ အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်သလို၊ ပညာရှင်များ အထောက်အထား တိတိကျကျ ရနိုင်အောင်လည်း အချက်အလက်တွေကို ဘယ်စာအုပ်က ဘယ်လိုယူထားတယ်ဆိုတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ စာညွှန်း၊ စာကိုး စတာတွေကိုပါ စနစ်တကျ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ နောင်တစ်ချိန်မှာ ဒီမြန်မာဝီကီကို အခြားသော ဝီကီများနဲ့ ချိတ်ဆက် ပေါင်းစည်းသွားနိုင်အောင်လို့ ဝီကီပီးဒီးယားက အသုံးပြုထားတဲ့ ဝီကီမီဒီယာ ဆိုတဲ့ စနစ်ပှေါမှာပဲ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ဝီကီပီးဒီးယားရဲ့ သဘောသဘာဝဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်က လုပ်ဆောင်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ လူအားလုံးကနေ ဝိုင်းဝန်းဖြည့်စွက် ဖန်တီးကြတဲ့ User Generating Encyclopedia ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအွန်လိုင်း မြန်မာဝီကီကို ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး၊ လူတန်းစားမရွေး မည်သူမဆို အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာက Resource & Knowledge Sharing ကို အားတက်သရော ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ ကျွန်တှောတို့ မြန်မာနိုင်ငံက အချင်းချင်း ရောင်းစားနေရုံမက၊ အင်တာနက်ပှေါမှာပါ တက်ရောင်းစားခံနေရတာကို မခံချင်တာကြောင့် ဒီဝီကီကို နှစ်ကာလအများကြီး အချိန်ပေးပြီး ပြုစုခဲ့တာပါ။ နောက်တစ်ခုက မြန်မာစာသားတွေဟာ ဒီဘက် ကွန်ပျူတာခေတ်မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ် စာသားအဖြစ်ကို ရောက်မလာဘဲ ရိုးရိုး စာရွက်ပှေါက စာသားအနေနဲ့ပဲ ရှိနေတာကို ပြောင်းလဲပစ်ချင်တာပါ။ နောက်ဆုံးနဲ့ အရေးအကြီးဆုံး တစ်ခုကတော့ မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သတ်တာတွေ၊ အကြောင်းအရာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံသားထက် နိုင်ငံခြားသားတွေက စနစ်တကျ ပြုစုပြီး သူတို့ပြုစုသမျှကိုသာ အားကိုးတကြီး လက်ဝေခံ အသုံးပြုနေရတာကို မခံချင်လို့ပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ စနစ်တကျ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ကျွန်တှော အလေးထားပြီး ပြောလိုပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေဟာ အလုပ်ကို စနစ်တကျ လုပ်သလို၊ စာအုပ်စာတမ်း ပြုစုရာမှာလည်း စနစ်တကျ အမြှောအမြင်ရှိရှိ ပြုစုခဲ့ကြသူများပါ။ ဒါကြောင့်လည်း သူတို့ရဲ့ စာတမ်းတွေ နည်းပညာတွေကို ကျွန်တှောတို့ အခုချိန်အထိ တန်ဖိုးထား လက်ကိုင်ပြုနေရဆဲပါ။ ဒီဝီကီကို အခုလို ကွန်ပျူတာနဲ့ နည်းပညာခေတ်မှာ အဲဒီစံနှုန်းထားများနဲ့ ညီအောင် ပြုစုပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မရှိသေးပေမယ့် နောင်အရှည်ကို တွေးပြီး တတ်နိုင်သမျှ မူပိုင်ခွင့် ကိစဿစများနဲ့ မငြိစွန်းအောင်လည်း ကြိုးပမ်းထားပါတယ်။ ပိုက်ဆံမရှိလို့၊ ဝေးလံခေါင်းပါးလို့ စတဲ့ အခြေခံ အားနည်းချက်တွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ နည်းပညာနဲ့ ဗဟုသုတ ချို့တဲ့မှု အဆက်ပြတ်မှုတွေကို တစ်ထောင့် တစ်နေရာကနေ ကူညီနိုင်ဖို့ကို အထူးရည်ရွယ် ထားပါတယ်။
PS: ကျွန်တှော့ဆီ ရောက်လာတဲ့ အမည်မဖှောတဲ့ စာလေးတစ်စောင်ပါ။ မြန်မာပြည်တွင်းက မြန်မာလူငယ်တွေ အခက်အခဲတွေ မျိုးစုံကြားကနေ ဒါမျိုးလေးတွေ ဘယ်ကအထောက်အပံ့မှ မရှိဘဲ လုပ်နေတာတွေရှိတယ်။ အခြားအခြားသော ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကို မမျှောကိုးတဲ့ အဖွဲ့လေးတွေလည်း လုပ်နေကြတာ အများကြီးရှိတယ်။ အများအတွက် အခမဲ့ဆိုတဲ့ ပရောဂျတ်လေးတွေ ရှိလာပြီ။ အားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတဲ့ လူထုအဖွဲ့အစည်းလေးတွေ ရှိလာပြီ။ အဲဒီက အသီးအပွင့်တွေလည်း မြင်နေရပြီ။ ကျွန်တှောတို့ ခူးဆွတ် စားသုံးနိုင်တော့မယ်။ နည်းပညာနဲ့ ဗဟုသုတဆိုတာ ချုပ်ကိုင်ထားသင့်တဲ့ အရာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တှောတို့ နည်းပညာတှောလှန်ရေး ခေတ်တစ်ခုကို တဖြည်းဖြည်း ကူးပြောင်းလာနေပြီလို့ ယုံကြည်နေမိပါတယ်။ အောင်မြင်ပါစေ။
Posted by NLS at 2/18/2008 07:01:00 PM No comments:
Labels: Literature, Myanmar, News, Technology
Rambo in Myanmar
ရမ်ဘို ဇာတ်ကားကို ခံစားခြင်း
အမေရိကန်က ရမ်ဘိုလည်း ဗီယက်နမ်မှာ ခေတ်ကုန်တော့ မြန်မာပြည်ကို ရောက်လို့လာခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တှောတို့ ငယ်ငယ်ကဆို ရမ်ဘို ဇာတ်ကားတွေဟာ အလွန် နာမည်ကြီး ပါတယ်။ ရမ်ဘိုဟာ အမေရိကန်ကို ကိုယ်စားပြု နေသလိုပါပဲ။ အမေရိကန်တို့ ဗီယက်နမ် စစ်ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပေမယ့် မီဒီယာပိုင်းဖြစ်တဲ့ ရမ်ဘိုမှာ အောင်မြင်ပါတယ်။ ကမဿဘာတစ်ဝှန်းလုံးက လူတွေက ရမ်ဘိုကို ကြည့်ရတာကိုး။ အကုန်လုံးဟာ ရမ်ဘိုကို အားပေးကြတယ်။ ကလေးတွေကအစ ရမ်ဘို ဗီယက်နမ်တွေကို သတ်တာတွေ့ရင် ဝေးကနဲ အှောဟစ် အားပေးကြတယ်။ အခုတော့လည်း ဗီယက်နမ်မှာ စစ်ပမ်းနေတဲ့ ရမ်ဘိုတစ်ယောက် ဇာတ်မြှုပ်နေရာက မြန်မာပြည်ထဲကို ရောက်လို့လာခဲ့ ပါတော့တယ်။
ကားဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာပဲ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းနဲ့ စထားပါတယ်။ ပြောချင်တာကတော့ မြန်မာပြည်မှာ ပြည်တွင်းရေး မငြိမ်းချမ်းသေးဘူးဆိုတဲ့ သဘော ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားမှာ တချို့သော မြန်မာတွေ ကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်ထားသလို ယိုးဒယားတွေလည်း ပါလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တှောထင်တယ်။ ရမ်ဘိုဟာ ဗီယက်နမ် စစ်ပွဲ အပြီးမှာ အမေရိကန်ကို မပြန်တော့ဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဇာတ်မြှုပ်နေထိုင်နေတယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိက အလုပ်က မြွေဖမ်းတဲ့အလုပ် ထင်ပါရဲ့။ တစ်ရက်တော့ သူ့ဆီကို အမေရိကန် ကှောလိုရာဒို အခြေစိုက် ကျန်းမာရေး ထောက်ပံ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ရောက်လာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ လူမျိုးစုလိုက် သတ်ဖြတ်မှု (Genocide) လုပ်နေလို့ သွားရောက် ကူညီမလို့ပါတဲ့။ သူတို့က ရမ်ဘိုကို မြန်မာပြည်ဘက်ကမ်း ပို့ခိုင်းတယ်။ လမ်းမှာ မြန်မာတစ်စုနဲ့တွေ့ပြီး စတင် အကြမ်းဖက် ခံရပါတော့တယ်။ ပြောစကားလေးတွေကို နားထောင်ကြည့်ရအောင်။ မြန်မာလိုပြောကြတာနှော
(မြန်မာ) ဟေ့မီးဖွင့်စမ်းကွာ မင်းတို့ သောက်ခွက်ကို ငါကြည့်ချင်တယ်
(မြန်မာ) ဒီရေကြောင်းတဝိုက်ဟာ ငါတို့နယ်ပဲ။ မင်းတို့ လွယ်လွယ်နဲ့ ဖြတ်သွားလို့ ရမယ် ထင်သလား။ မင်းတို့ကို အခုချက်ချင်း သတ်ပစ်လိုက်လို့ ရတယ်ကွ သိလား။ မခန့်လေးစားတော့ လာမလုပ်နဲ့
(မြန်မာ) မင်းတို့ လှေစုတ်ပှေါက ပါသမျှ အကုန်လိုချင်တယ်။ ဒါနဲ့ အဲဒီ ကုလားရူးတွေရော ဘယ်သွားကြမှာလဲ(ရမ်ဘို) ဆေးသွားပို့မလို့
(မြန်မာ) ဟိုတစ်ယောက်ကရော မိန်းခလေးမဟုတ်ဘူးလား။ သူ့ကို ဒီခှေါခဲ့စမ်း .. ခှေါခဲ့စမ်း
(ရမ်ဘို) ကျန်တာယူပါ သူ့တော့ ထားပါ
(မြန်မာ) မင်းပါးစပ် ပိတ်ထားစမ်း။ သူ့ကိုသာ ဒီခှေါခဲ့။ ဒီခှေါခဲ့
(မြန်မာ) မင်းတို့ပေးမယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်။ ကောင်မကိုသာ ဒီခှေါခဲ့
(မြန်မာ) ထစမ်း ရပ်စမ်း -ာသည်မ။ အခုချက်ချင်း မင်းတို့ကို သတ်ပစ်လိုက်မယ်။ ဒါနောက်ဆုံးပဲ။
(မြန်မာ) ထစမ်း ရပ်စမ်း -ာသည်မ။
ဒါနဲ့ပဲ ရမ်ဘိုက အားလုံးကို သတ်ပစ်ပြီး ကယ်တင်လိုက်ရတယ် ဆိုပါတော့။ နောက်ဆုံး မြန်မာဘက်ကမ်းကို သူတို့အဖွဲ့ ရောက်သွားတယ်။ နယ်စပ်က ကျေးရွာလေးတစ်ရွာမှာ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး ကူညီမှုတွေ ပြုကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ မြန်မာစစ်တပ်က အဲဒီရွာလေးကို ဝင်စီးပြီး ရွာလုံးကျွတ် သတ်ဖြတ်တာကို ပြပါတယ်။ အခုန အဖွဲ့ကတော့ အဖမ်းခံရတယ်။ သူတို့ အဖမ်းခံရတာကြောင့် အမေရိကန်က ကွန်မန်ဒိုတွေလွှတ်ပြီး ကယ်ခိုင်းပါတယ်။ ရမ်ဘိုပဲ လမ်းပြရတယ်။ ကယ်တင်ရေး အဖွဲ့မှာ သူမပါပေမယ့် မနေနိုင်တာကြောင့် တိတ်တဆိတ် နေရစ်ပြီး အားလုံးကို ကယ်တင်ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါပဲ။
ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အသံပိုင်းကတော့ ပြောစရာ မလိုအောင်ကို ကောင်းမွန်ပါတယ်။ အသံတွေဟာ ကြည်လင် ပြတ်သားမှု ရှိသလို ထောင့်လည်း စေ့ပါတယ်။ ရမ်ဘိုကြီး မြန်မာစကား ပြောတဲ့လေသံကလည်း ရယ်ရပါတယ်။ ကင်မရာ အယူအဆတွေလည်း ကောင်းတယ်။ ရှုခင်း ရှုကွက် ကောင်းကောင်းတွေ မပါပေမယ့် ကင်မရာ ရိုက်ချက်တွေ ကောင်းတယ်။ ညအမှောင် ရိုက်ချက်တွေလည်း ကောင်းတယ်။ ဇာတ်ညွှန်းပိုင်းမှာလည်း စေ့စပ်မှု ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေလည်း တှောတှောကောင်းပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဇာတ်ကားမို့ မြန်မာသံတွေ ဝေနေအောင် ကြားရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာတော့ တစ်ဖက်က ရမ်ဘိုနဲ့ အားပြိုင်နိုင်ခဲ့တာ မြန်မာဘက်က စစ်ဗိုလ်မှူးပါပဲ။ စကားများများ မပြောဘဲနဲ့ ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အမေရိကန်တွေကို ဗိုလ်မှူးက ဖမ်းမိတော့ ငါတို့နိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို စွက်ဖက်ဦးကွာ.. စွက်ဖက်ဦးကွာ ဆိုပြီး ကြိမ်နဲ့ ရိုက်တဲ့ အခန်းလေးကတော့ အကယ်ဒမီရှော့ ပါပဲ။ အနုပညာ အမြင်အရ ပြောပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် ဒီဇာတ်ကားမှာ အားနည်းချက် တွေလည်း မနည်းပါဘူး။ အဓိကကတော့ ဇာတ်လမ်းကျောရိုး မခိုင်မာဘူး ဇာတ်အိမ် မခိုင်မာဘူး။ မြန်မာဘက်ကို မကောင်းပြချင်လွန်းအား ကြီးသွားတာကြောင့် သမရိုးကျ ဇာတ်လမ်းထဲက ခွဲထွက်ပြီး ဟိုက်ပါတွေ ဖြစ်သွားတဲ့ သဘောမျိုးလည်း တွေ့ရပါတယ်။ နယ်မြေတစ်ခုက ဆိုးသွမ်းတဲ့ စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေအဖြစ်လောက်ပဲ သဘောသက်ရောက်သွား ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ အထက်ကလို ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်း လုပ်ရပ် တွေကိုပဲ ထုတ်နှုတ်ရွေးပြသွားလေတော့ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး တစ်နိုင်ငံလုံး အနေနဲ့ သိကဿခာကျစေပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ တစ်ကမဿဘာလုံး ဖြန့်တဲ့ကားပါ။ ဒီကားကို ကြည့်မိတဲ့ သူတိုင်းက နေရာဒေသလေး တစ်ခုလို့ မမြင်ဘဲ မြန်မာတွေအားလုံး အပြောအဆို အနေအထိုင် ရိုင်းစိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခှေါမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ အမေရိကန်က မြန်မာပြည်ကို Media Campaign လုပ်တဲ့ သဘောလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနုပညာရသ အနေနဲ့ကြည့်ရင် Stallone မပါလည်း ဖြစ်တဲ့ သာမန် စစ်ကား သာသာလေးပါ။ ဒါလောက်ကတော့ ကျွန်တှောတို့ဆီက သီဟတင်စိုးတောင် ရိုက်နိုင်ပါသေးတယ်။ အနုပညာရသ မရှိပါဘူး။ တမင်လုပ် ရိုက်ထားတာမျိုးကြီး ဖြစ်နေတယ်။
ဒါပေမယ့် အထက်က သုံးသပ်ပြထားသလို အခြားနည်းစနစ်တွေ၊ ကင်မရာအယူအဆ၊ ဇာတ်ညွှန်း စတာတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မဆိုးလှဘူးလို့ ပြောနိုင်ပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံက ရိုက်ကူးတဲ့ မြန်မာနဲ့ဆိုင်တဲ့ ရှေးဟောင်း ဇာတ်ကားတွေ လောက်တောင် မကောင်းဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။ ကံမကောင်းချင်တော့ ကျွန်တှောတို့ဆီမှာ အဲဒီဇာတ်ကားကို ပိတ်ထားတယ်လို့ သိရတယ်။ ကျွန်တှောသာဆို ဒါမျိုးကားကို ချပြပစ်လိုက်တယ်။ အခုလို ပိတ်ထားတော့ လူတွေက ဒါဟာ တကယ့်အဖြစ်အပျက်မို့လို့ ပိတ်ထားတာဆိုပြီး တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ အရမ်းအရမ်းကို စိတ်ဝင်တစား ရှိနေကြတော့ တာပေါ့ဗျာ။ ထူးဆန်းတယ် တကယ့် အတွေးအခှေါတွေ။
PS: ခင်ဗျာ…. ကျွန်တှောလား။ ဘယ်ကလာ အခွေဝယ်ကြည့်လို့ သိရမှာလဲဗျာ။ ဟိုနေ့က နိုင်ငံခြားက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောရင်း သူပြောပြသွားတာလေးတွေ မှတ်မိသလောက်နဲ့ အင်တာနက်ကနေ ဇာတ်လမ်းဖတ်ပြီး ပြန်ရေးချထား လိုက်တာပါ။ :P
Posted by NLS at 2/18/2008 06:41:00 PM No comments:
ပလန်းနတ် ဗာလင်တိုင်း ဝဘ်ပေ့ခ်ျကနေ လှပတဲ့ အီးကဒ်လေးတွေကို ပို့လို့ ရပါပြီ။
Posted by NLS at 2/14/2008 06:06:00 PM No comments:
Labels: Advertising, Myanmar, Website
Google Valentine Logo
You will never find Google's Valentine Logo like that.
Logo Design: NLS
Posted by NLS at 2/14/2008 11:27:00 AM No comments:
Labels: Google, Logo
Blogging ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားပြီး Blogger တစ်ယောက် ဖြစ်လာချင်သူများအတွက်။
English 385 pages PDF 12.2 MB 2006 by Wiley Publishing, ISBN: 9780471770848
Download : File Factory
Posted by NLS at 2/13/2008 11:59:00 AM 1 comment:
Labels: Blogging, Download, Ebooks, PDF
Searching Documents in Google
How To Search Documents in Google
ဂူဂယ်မှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဖိုင်ကို ရှာဖွေတဲ့အခါ တိကျတဲ့အဖြေ ရနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ Search Box မှာ သမရိုးကျ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နာမည်လေး ရိုက်ထည့်ရုံနဲ့ကတော့ တိကျတဲ့အဖြေ မရနိုင်ပါဘူး။
Documents တွေရှာမယ်ဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အမျိုးအစားကို လိုက်ပြီးတော့ အပို ကုဒ်လေးတွေ ထည့်သွင်းပြီး ရှာရပါတယ်။ ဥပမာ အကြောင်းအရာက Post Modernism ဆိုရင်
post modernism filetype:pdf
post modernism filetype:doc
post modernism filetype:ppt
Google Scholar ထဲမှာလည်း စာတမ်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဂူဂယ်စကှောလာဆိုတာ တကဿကသိုလ်တွေ အဖွဲ့အစည်းတွေက လက်ခံ အသုံးပြု စုဆောင်းထားတဲ့ ဒေတာတွေထဲမှာ ရှာဖွေပေးတာပါ။ အဲဒီအထဲကနေ ရှာချင်တယ် ဆိုရင်တော့
post modernism filetype:pdf site:edu
နောက်တစ်ခုက အဘိဓာန် အင်တာနက် တပ်ဆင်ထားတယ်ဆိုရင် သီးခြားအဘိဓာန် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တောင် တပ်ဆင်ထားစရာ မလိုပါဘူး။ ဂူဂယ်မှာ ဒီလိုရိုက်ရုံနဲ့ အဖြေရနိုင်ပါတယ်။
ဒါလေးတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က သိထားမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် တိကျတဲ့ ရလာဒ်တွေ ရနိုင်သလို အချိန်ကုန်လည်းသက်သာ အကျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျ အနေနဲ့ကတော့ အီးဘွခ်တွေ တှောတှောများများ၊ စာတမ်းတွေ တှောတှော များများဟာ ပီဒီအဖ် ဖိုင်အမျိုးအစားနဲ့ ရှိနေတတ်တာမို့ အထက်ကလို ရှာဖွေမယ်ဆိုရင် အများကြီး တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ နောက်ပိုင်းလည်း အခွင့်သင့်တဲ့အခါ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာတမ်းတွေ အများကြီး ရှိတဲ့နေရာ၊ Data Center တွေကို ဖှောပြပေးသွားပါဦးမယ်။
သီချင်းတွေ ရှာချင်တယ်ဆိုရင် ဒီပိုစ့်လေး ဖတ်ပါ။
ဂူဂယ်ထဲမှာကို သီချင်းတွေရှာချင်သေးတယ်ဆိုရင် ဒါလေးကို ဖတ်ပါ။
Posted by NLS at 2/12/2008 05:47:00 PM No comments:
Labels: Computer, Google, How To, PDF
2006 Myanmar Academy Awards
၂၀၀၆ ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုများ
၂၀၀၆ မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု ပေးပွဲက ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်ချင်ရင် ပလန်းနတ် အကယ်ဒမီ ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်မှာ သွားကြည့်လို့ ရပါတယ်။ (http://www.planet.com.mm/academy/fashion.cfm)
Posted by NLS at 2/11/2008 10:16:00 AM No comments:
Sate Kuu Tay Thi (Hnin Khar Moe)
Myanmar Seaman Help Desk
http://burmeseseaman.blogspot.com (Seamen Society)
http://2bcond.blogspot.com (Myanmar Video Creation)
Pieces ofalonely bird
http://pieces-of-a-bird.blogspot.com (General Blog)
War War 81
Green Girl Lai Lai
K-POP Myanmar Blog
Myanmar Open Engineering Association
Hulala Hulala (Picture Blog)
Yay Pyaw Ngaht
Pan Kha Yay
Aye Myo Win
Shwe Gyan Thu
ကျေးဇူးပြုပြီး ဒါလေးကို သေချာဖတ်ပေးစေချင်တယ်။ ကျွန်တှောလည်း အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မို့ ကျွန်တှော့မှာ အားချိန် သိပ်မရှိပါဘူး။ ဒီ Myanmar Blog Directory လေးကို အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ရ လွယ်ကူအောင် လုပ်ထားတာပါ။ ဒီတော့ ဒီဘလော့ဂ်မှာ လင့်ခ်ပျက်နေတာတွေ၊ ဘလော့ခ် မဟုတ်တဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေ တွေ့လို့ရှိရင် အကြောင်းကြားပေးစေချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်လင့်ခ်လေးတွေ ပေးတဲ့အခါ စည်းစနစ်တကျလေး ပေးစေချင်တယ်။ တချို့က လင့်ခ်ကို ဒီအတိုင်းရေးသွားတယ်။ အပှေါက ကျွန်တှောရေးထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလေးတောင် မဖတ်ကြဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်တှော့အတွက်လည်း အလုပ်ပိုလုပ်ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဘလော့ဂ်လင့်တွေ၊ နာမည်တွေကို ခဏခဏ ပြောင်းတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး လင့်ခ်တစ်ခုကို ဘလော့ဂ်နာမည်တစ်ခုနဲ့ တစ်ကြိမ်ထဲ ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျွန်တှောလည်း ဒီဘလော့ဂ်လေးကို ဒီထက်ပိုကောင်းအောင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
Please comment like this
Blog Name : XXX
Address : http://xxx.blogspot.com (no www.xxx.blogspot.com)
Catagorie : General or Personal or whatever
Posted by NLS at 2/10/2008 02:54:00 PM No comments:
Election in 2010 :)
Myanmar to hold national referendum in May and general election in 2010
www.chinaview.cn 2008-02-10 04:35:38
YANGON, Feb.9(Xinhua) -- Myanmar will hold national referendum on draft of the State Constitution in May this year andageneral election in 2010, state-run Myanmar Radio reported inanight broadcast Saturday.
Myanmar State Peace and Development Council (SPDC) issued Saturday two declarations on holding ofanational referendum on draft of the State Constitution andageneral election to produce parliament representatives, according to official report.
Myanmar's National Convention to work out detailed basic principles for drawing upanew state constitution began in 1993 and successfully completed in 2007, the declaration No. 1 said.
The convention has adopted detailed basic principles for the new State Constitution, and Myanmar's State Constitution Drafting Commission is drafting the new State Constitution to be approved by the referendum, said the SPDC's declaration.
It was participated by over 1,000 delegates from eight categories of delegate groups including national races and turned-in former anti-government ethnic armed groups.
In order to transfer the state power from military government to civil government,amulti-party general election will be held in 2010 in accordance with the new State Constitution, said the SPDC's declaration No. 2.
The state constitution drafting commission was formed on Oct. 18, 2007 and started work in December as the third step of the road map to undertake the drafting ofanew state constitution in line with the roadmap.
According to the government's roadmap announced in August 2003,the new constitution draft is to be endorsed throughanational referendum, thenanew general election will follow to produce parliament representatives and formanew democratic government.
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး မှတ်မှတ်သားသားလေး ဖြစ်သွားအောင်လို့ ဘလော့ဂ်မှာ မှတ်ထားလိုက်တဲ့ သဘောပါ။
Posted by NLS at 2/10/2008 12:15:00 PM No comments:
ဆြာလင်းဆက်နှင့် ဂွေသာလီပြည်မှ ပုဏဿဏားကြီးများ
ဆြာလင်းဆက်နှင့် ဂွေသာလီပြည်မှ ပုဏဿဏားကြီးများ ပုံပြင်ကြီး မကြာမီ လာမည် မျှော။ ပါဝင်လိုသူ ပုဏဿဏားများ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။ ဒန်တန့်တန်။
Posted by NLS at 2/08/2008 10:10:00 PM No comments: